Maxaad Ka Taqaanaa Xilliga 2aad ee Ilaah-laawaha? - Wararka Ugu Sareeya
Maxaad Ka Taqaanaa Xilliga 2aad ee Ilaah-laawaha?
Soo koobid kooban oo ku saabsan Godless:
Ku saabsan xilliga ugu horreeya:
Sidee Jilayaasha Ilaah-laawaha loogu diyaariyey Doorkooda?
Ma jeceshahay riwaayadaha iyo riwaayadaha dhabta ah ee Maraykanka? Haddii aad sameyso, markaa waxaad timid meeshii saxda ahayd. Maqaalkan, waxaynu ku baadhaynaa barnaamij taxane ah oo Maraykan ah oo lagu magacaabo Godless. Bandhigga TV-ga Ilaah-laawaha waxaa laga sii daayaa NETFLIX. Sababtoo ah fikradda cusub ee taxanaha ah iyo sheeko sheeko, waxay soo jiidatay taageerayaal badan oo adduunka oo dhan ah. Haddaba, aan aragno waxa bandhiggu ku saabsan yahay
Sheekadu waxay ku saabsan tahay dembiilayaal caan ah oo lagu magacaabo Frank Griffin iyo kooxdiisii, kuwaas oo raadinaya inay ka aargutaan Roy Goode, oo hore u baran jiray oo khiyaanay walaaltinimada. Isaga oo baxsad ah, Roy waxa uu gabaad ka dhigtay magaalo lagu magacaabo La-belle, New Mexico
Ma ahan magaalo caadi ah oo ku taal Mexico; Taa beddelkeeda, waxaa inta badan ku nool dumar. Haa, si sax ah ayaad u maqashay.
Halkan Roy waxa uu la baxay naag lagu magacaabo Alice Fletcher, oo ah carmal qallafsan oo laga baxay. Dabadeed, markii Griffin iyo kooxdiisii ​​ay gaadheen magaalada, oo ay inta badan maamulaan dumarku, dadka deggan magaalada ayaa isu soo baxay si ay isaga difaacaan burcadiisii ​​dilaaga ahayd.
Waxay u egtahay mid xiiso leh, sax? Haddii aadan weli daawan taxanaha, waa inaad si dhab ah u fahantaa sida ay uga fiican yihiin burcadda dembiilayaasha ah.
Netflix ayaa ku dhawaaqday xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee bandhigga Noofambar 22, 2017, waxaana jeclaaday taageerayaashu. Halkan xilliga oo dhan, waxaad la kulmi doontaa shirqoolka uu dambiilaha Frank Griffin, iyo burcaddiisu u wadeen hammi ah inay ka aargutaan difaacii dhabarka u jeediyey walaalnimada. Waxaan la kulmi doonaa jilayaal badan xilli ciyaareedka oo dhan, oo ay ku jiraan Roy iyo Alice Fletcher, kuwaas oo la halgamaya burcadda. Qeybtii ugu dambeysay, waxaan ogaanay in ka dib markii ay burcaddu gaareen magaalada New Mexico, muwaadiniinta La-Belle waxay diyaar u ahaayeen weerarka Frank, waxaana heshiis kala saxiixday Frank iyo Roy.
Akhri wax dheeraad ah: Xiliga Joogsiga 2 Cusbooneysiin & Wax ka badan
Xiliga labaad, waxaad baran doontaa sida ay magaaladu ula dagaalantay oo ay ula dagaalantay Burcadii dilaaga ah ee Frank. Taageerayaasha ayaa si aad ah u sugaya xilli ciyaareedka soo socda, kaas oo la filayo in la sii daayo Noofambar 17, 2021. Xiligan waxa kale oo uu yeelan doonaa siddeed qaybood oo leh qaar ka mid ah wajiyo iyo jilayaal cusub. Xilli ciyaareedkii u dambeeyay waxa hubaal ah in daawadayaasha uu ku reebay naxdin oo aad u xiiseeya xilli-2. Haddaba aan aragno waxa ay qabanayso marka xigta.
Kaliya iska hubi inaad daawato bandhigga hal mar; hal daqiiqo kama qoomamayn doontid sheekada. Xiliga soo socda ayaa laga sii dayn doonaa NETFLIX bisha November 17 ee sanadkan.
Maxaad u malaynaysaa sida ay jilayaasha ama atariishooyinka ugu diyaar garoobaan doorka ay ku leeyihiin si ay ugu caddeeyaan filimka ama taxanaha?
Ma hubo taxanaha kale, laakiin waxaan kuu sheegi karaa sida ciyaartoyda Godless ay ugu diyaar garoobeen doorkooda:
Isagoo ka hadlaya Daanyeel, wuxuu maskaxdiisa ku diyaariyay sheeko aabbe iyo wiil maskaxdiisa ku jira. Nin aabbe ah oo wiilkiisii ​​ama wiil uu dhalay ka dhintay. Frank Griffin, dabeecadda uu ciyaaray, wuxuu u baahday hoos u dhac, ma aha kaliya hal laakiin koox yar, laakiin ma jirin wax noocaas ah oo la heli karo 1880-yadii.
Akhri wax dheeraad ah: Grimm Xiliga 7 | Taariikhda Siideynta | Jilayaasha | Shirqoolkii Iyo Qaar Kale
Jilayaasha waxay heleen dhiirigelinta inay doorkooda ciyaaraan ilo kala duwan. Isagoo ka hadlaya Dockery, oo ciyaaray doorka Alice Fletcher: carmal madax-bannaan, laakiin carmal ah oo maamusha beer yar oo ay weheliso soddohdeed iyo wiilkeeda. Waxay qaddarinaysaa xerada Cowboy ee ku dhiirigelisay inay ku jirto dabeecadeeda; waxay baratay sida qoriga loogu toogto xerada dhexdeeda. Waxay tidhi, tani waa fududayn aan sameeyay markii ugu horeysay; markii ugu horeysay ee aan qoriga qabtay, aad ayaan u argagaxay sidoo kale cabsi. Waxa kale oo aan bartay fuulista hab reer galbeed ah oo aad uga duwan sidii aan hore u aqaanay.
Samantha Soule waxay ciyaartay doorka Charlotte Temple. Qof kastaa wuxuu ku tilmaamay inay tahay qof neerfaysan oo isku xidhan oo had iyo jeer ku jirta Axadeeda ugu fican. Maxaad u malaynaysaa, sida ay Soule ugu diyaarisay doorkeeda? Waxay daawatay filimada galbeedka Classic sida High Plains Drifter iyo McCabe iyo Mrs Miller. Kaliya ma daawatay filimka laakiin waxay baratay oo waxay qaadatay dhiirigelin doorkeeda. Laakin waxa ay sidoo kale ku dartay in helida dhiirigelintu ay ahayd cudur daar aad u wanaagsan in la daawado taxanahan.
Whitey Winn, oo uu ciyaaray Thomas Brodie-Sangster, wuxuu ahaa ku xigeenka magaalada daacada ah oo geesinimo ku leh gudashada waajibaadkiisa. Waxa uu mahad oo dhan siiyey qorista tixda iyo qoraalka; uma baahnayn qorshe badan. Waxa uu sheegay in jilayaasha dhamaantood si fiican looga fikiray marka wax laga qorayo. Scott Frank wuxuu haystay wax kasta oo aan ahayn muddo gaaban laakiin waqti aad u dheer. Markii aan galay qaybta, wax walbaa waxay diyaar u ahaayeen inay tagaan, markaa uma baahnin inaan cilmi-baaris badan ku sameeyo qaybtayda.
Waxaan filayaa inaad gacanta ku hayso macluumaad badan oo ku saabsan xilliga cibaadada 2? Hadday haa tahay, markaa suulka iga sii qaybta faallooyinka si aan sidoo kale u helo dhiirigelin joogta ah oo aan ku siiyo macluumaad xiiso leh. Sidoo kale, ha ilaawin inaad hubiso boggayaga si aad u hesho macluumaad badan oo xiiso leh oo ku saabsan taxane iyo filimo kale.
Xilliga Smite 9 wuxuu bilaabmayaa 25-ka Janaayo!
Thetan Arena Metaverse: Hal-abuurayaasha, Gameplay, Ciyaar si aad u kasbato, Shaqada | Xogtii Ugu Danbaysay!
daawo filimo buuxa oo bilaash ah oo bilaash ah is -qoris la'aan
sideen u iibsadaa netflix
goobo loogu talagalay filim bilaash ah onlayn
goobaha lacag bixinta ugu wanaagsan ee tv -ga
hadda waa hoos